ယရှေုသညျသူကပြောပါတယ်ရှိသည်ဟုအစီရင်ခံနေသည်ဘယ်သူကိုတကယ်လား? ယရှေုသညျဘုရားသခငျ၏သားတျောကိုတကယ်ခဲ့သလား CS Lewis ကဒါယုံကြည်သည်နှင့်လည်းသူကယုံကြည်စိတ်ချသောလူသဘောတူရန်အတွက်အလွန်ကောင်းသောအငြင်းအခုံခဲ့သည်ဟုယုံကြည်: ယရှေုသညျအခိုင်အမာဘယ်သူကိုမဟုတ်ခဲ့လျှင်, သူကရူးရူးနေတဲ့မုသာကိုသုံးသော, ဒါမှမဟုတ်ပိုဆိုးဖြစ်ရမည်။ သူအဘယ်သူမျှမအလေးအနက်ထားဘို့ငြင်းခုန်သို့မဟုတ်ဤအခြားနည်းလမ်းကိုလက်မခံနိုင်ကြောင်းအချို့နှင့်သာမိမိအရုပ်ဆိုးရှင်းပြချက်ထားခဲ့တယ်။
ကျွန်မအကြီးအကငျြ့ဝတျဆရာအဖြစ်ယေရှုလကျခံဖို့အဆင်သင့်ပါပဲ, ဒါပေမယ့်ငါဘုရားဖြစ်မည်သူ၏ပြောဆိုချက်ကိုလက်မခံကြဘူး "ဟုအဆိုပါသည်။ " ငါကလူကိုမကြာခဏကိုယ်တော်အကြောင်းကိုပြောပါသောကယ့်ကိုမိုက်မဲသောအရာဟူမူကားမည်သူမဆိုကာကွယ်တားဆီးဖို့ကဒီမှာကြိုးစားနေပါ၏ " တဦးတည်းအရာကျွန်တော်မပြောရပေမည်။ အမှုအရာသည်သခင်ယေရှု၏မျိုးကဆိုပါတယ်တဲ့သူတစ်ဦးကလူတဦးအကြီးအကငျြ့ဝတျဆရာမဖြစ်မည်ဖြစ်ကြောင်းပြောသည်။ တစ်ဦးအဆင့်တွင်သူတစ်ဦး poached ကြက်ဥကပြောပါတယ်သောသူနှင့်အတူ - - သူကရူးရူးလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်တခြားသူ၏မာရျနတျပါလိမ့်မယ် ငရဲ ။
သင်သည်သင်၏ရွေးချယ်မှုလုပ်ရပေမည်။ ဒီသောသူဖြစ်သော်လည်း, ဘုရားသခငျ၏သားတျောဖြစ်စေ: သို့မဟုတ်အခြားတစ်ဦးအရူးသို့မဟုတ်ပိုဆိုးတစ်ခုခု။ သင်တစ်ဦးလူမိုက်များအတွက်ကိုယ်တော်ချုပ်ထားနိုငျသညျ, သငျသညျကိုယျတျောမှာတံတွေးထွေးပြီးနတ်ဆိုးအဖြစ်ကိုယ်တော်ကိုသတ်အံ့သောငှါနိုင်ပါတယ်; ဒါမှမဟုတ်သင်ကသူ့ခြေရင်း၌လဲကိုယ်တော်သခင်ဘုရားနှင့်ဘုရားသခင်၏ခေါ်နိုင်ပါတယ်။ သို့သော်ကျွန်တော်တို့ကိုသူ၏ကွီးစှာသောလူ့ဆရာဖြစ်ခြင်းအကြောင်းကိုမဆိုနာယကဒဏ်ဍာရီနှင့်အတူမလာကြကုန်အံ့။ သူကကျွန်တော်တို့ကိုဖွင့်လှစ်ကြောင်း left မထားပါဘူး။
CS Lewis က '' အကြိုက်ဆုံးအငြင်းအခုံ: အဆိုပါအယူမှားအကျပ်ရိုက်မှု
အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ကဒီမှာရှိတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် မှားယွင်းသောအကြပ်အတည်း (သုံးရွေးချယ်စရာရှိပါတယ်ကတည်းက, ဒါမှမဟုတ် trilemma) ။ သူတို့ရရှိနိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောသူများဖြစ်ကြ၏လျှင်အဖြစ်အများအပြားဖြစ်နိုင်ခြေတင်ပြနေကြပါတယ်။ တစ်ခုမှာပိုမိုနှစ်သက်နှင့်အခြားသူများကိုသေချာပေါက်အားနည်းခြင်းနှင့်ယုတ်ညံ့အဖြစ်ပေးအပ်နေစဉ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကာကွယ်သည်။
ယောဟနျသ Beversluis ရေးသားခဲ့သည်အဖြစ်ဤ CS Lewis ကများအတွက်ပုံမှန်နည်းဗျူဟာသည်:
"တစ်ဦး apologist အဖြစ် Lewis ကရဲ့အဆိုးဝါးဆုံးအားနည်းချက်များကိုတစ်ခုမှာမိစ္ဆာအကြပ်အတည်းသည်မိမိစျြမွတျနိုးဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာလေ့ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအခြားရွေးချယ်စရာရှိပါတယ်သည့်အခါနှစ်ဦးကိုအခြားနည်းလမ်းများအကြားရွေးချယ်ရာတွင်၏စွပ်စွဲလိုအပ်ချက်နဲ့သူ့ရဲ့စာဖတ်သူတွေရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်တယ်။ အခြားဦးချိုတစ်ခုရယ်စရာကောက်ရိုးသူဖြစ်၏နေစဉ်အကြပ်အတည်းတစ်ခုမှာဦးချိုကိုပုံမှန်အားဖြင့်, ခပ်သိမ်းသောင်း၏သရုပ် Force အတွက် Lewis ကရဲ့အမြင်ထွက်သတ်မှတ်။
စကြဝဠာတစ်သတိစိတ်များ၏ထုတ်ကုန်ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးမျှသာ "fluke" (MC ။ 31) ဖြစ်ပါသည်ဖြစ်စေ။ ကငျြ့တရားတဲ့ဗျာဒိတ်ဖြစ်ပါသည်သို့မဟုတ်ပါကတစ်ဦးနားမလည်နိုင်လောက်အောင်ထင်ယောင်ထင်မှား (PP, 22) ဖြစ်ပါသည်ဖြစ်စေ။ စာရိတ္တဟာသဘာဝလွန်အတွက် grounded ဖြစ်ပါတယ်သို့မဟုတ်ပါကလူ့စိတ်ကို (PP, 20) ၌ "မျှသာလှည့်ကွက်" ဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်စေ။ အမှားအမှန်ဖြစ်စေအစစ်အမှန်ဖြစ်ကြောင်းဒါမှမဟုတ်သူတို့ "မျှသာအဓိပ်ပါယျမရှိသောစိတ်ခံစားမှု" (CR, 66) ဖြစ်ကြသည်။ Lewis ကထပ်ကာထပ်ကာထိုအငြင်းခုံတိုးတက်လာ, ထိုသူအပေါင်းတို့သည်အတူတူပင်ကန့်ကွက်ဖို့ပွင့်လင်းပါ။ "
သခင်, Liar, ရူးရူး, သို့တည်းမဟုတ် ... ?
ယရှေုသညျသေချာပေါက်သခင်ဘုရားဖြစ်ရပါမည်သူ၏ငြင်းခုံမှကြွလာသောအခါ, Lewis ကထိရောက်စွာဖယ်ရှားပစ်မထားဘူးသောအခြားဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါတယ်။ အများဆုံးသိသာဥပမာနှစျယောကျဖြစ်ကောင်းယရှေုသညျရိုးရှင်းစွာမှားခဲ့ဖြစ်ကောင်းကျွန်တော်သူအမှန်တကယ်ကဆိုပါတယ်သောအရာကိုတစ်ဦးတိကျမှုစံချိန်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးကြောင်းကိုများမှာ - သည်မှန်လျှင်, အကယ်စင်စစ်သူကပင်ရှိခဲ့သည်။
သူများသည်နှစ်ခုဖြစ်နိုင်ခြေတကယ်တော့ဒါဟာ Lewis ကကဲ့သို့အသိဉာဏ်တစ်စုံတစ်ဦးကသူတမင်တကာထည့်သွင်းစဉ်းစားထဲကသူတို့ရှိရာမှဆိုလိုပေသည်သောသူတို့အထင်ဘယ်တော့မှကြောင်း implausible င်ဒါသိသာဖြစ်ကြသည်။
သေအချာအလုံအလောက်, Lewis က '' အငြင်းအခုံပထမရာစု၏အခြေအနေတွင်အမှန်တကယ်လက်မခံနိုင်ဖြစ်ပြီး ပါလက်စတိုင်း ယုဒလူတို့တက်ကြွစွာကယ်ဆယ်ရေးစောင့်ဆိုင်းရာ။ ဒါဟာသူတို့ "မုသာကိုသုံးသော" သို့မဟုတ်တူသောတံဆိပ်များနှင့်အတူမေရှိယ status ကို၏မမှန်ကန်ကြောင်းတောင်းဆိုမှုများအားရင်းရင်းနှီးနှီးနှုတ်ဆက်ကြလိမ့်မယ်လို့အစွန်းရောက်အတွက်မဖြစ်နိုင်ရဲ့ "ရူးရူး။ " မယ့်အစား, သူတို့ကလတ်တလောပြိုင်ဘက်တွေနဲ့အမှားတစ်ခုခုရှိခဲ့ကြောင်းရှာဖွေနောက်ထပ်တောင်းဆိုသူကစောင့်ဆိုင်းဖို့ပေါ်ပြောင်းရွေ့ခဲ့ကြလိမ့်မယ် ။
"မုသာကိုသုံးသော" နှင့် "ရူးရူး" ၏ရွေးချယ်စရာသူတို့ကိုယ်သူတို့ Lewis ကအားဖြင့်ချေပမဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဟာ Lewis က '' အငြင်းအခုံပယ်ချနိုင်ရန်အတွက်အခြားရွေးချယ်စရာဖြစ်နိုင်ခြေအကြောင်းအများကြီးအသေးစိတ်သို့သွားကြဖို့ပင်မလိုအပ်ပါဘူး။
ဒါဟာ Lewis ကသူတို့ကိုအဖြစ်ယုံကြည်မှတ်တော်မမူကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖွင့်ပေမယ့်သူကအခြားသူမည်သူမဆိုသဘောတူရန်အဘို့အကောင်းအကြောင်းပြချက်မပေးပါဘူး - သူအနေနဲ့ပညာရပ်ဆိုင်ရာပညာရှင်ဖြစ်ခဲ့သည်ဟူသောအချက်ကိုပေးထားသော awfully သံသယဖြစ်ဖွယ်အရာမဟုတ်, ဥာဏ်ရည်, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆွဲဆောင်ဖို့ကြိုးစားနေရဲ့ - တစ်ဦး ထိုကဲ့သို့သောနည်းပရိယာယ်နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်ရှုတ်ချခဲ့ကြပေသည်ရှိရာအလုပ်အကိုင်သူထိုအရပ်၌သူတို့ကိုသုံးစွဲဖို့ကြိုးစားခဲ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
ယေရှုအားအလားတူမဟုတ်ကြောင်းအပြင်းအထန်တောင်းဆိုဖို့မည်သည့်အကြောင်းပြချက်ကောင်းလည်းမရှိ ကတခြားဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ ယောသပ်သည်စမစ်, ဒါဝိဒ်သည် Koresh, မာရှယ် Applewhite, ဂျင်မ်ဂျုန်းနှင့် Claude Vorilhon တူသော? သူတို့မုသာဝါဒီများဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လော ရူးရူး? နှစ်ဦးစလုံး၏တစ်ဦးကနည်းနည်း?
ဟုတ်ပါတယ်, Lewis က '' အဓိကရည်မှန်းချက်ကြီးစွာသောလူ့ဆရာမအဖြစ်ယေရှု၏လစ်ဘရယ်ဘာသာရေးအမြင်ဆန့်ကျင်ငြင်းခုန်ရန်ဖြစ်တယ်, ဒါပေမယ့်လည်းဖြစ်ခြင်း (သို့မဟုတ်ဖြစ်လာ) ရူးသို့မဟုတ်လည်းမုသာစကားကိုအနေဖြင့်တစ်စုံတစ်ဦးကိုတစ်ဦးအလွန်ကြီးစွာသောဆရာဖြစ်ခြင်းအကြောင်းကိုဆနျ့ကငျြဘာမှမရှိဘူးဖြစ်ပါတယ်။ အဘယ်သူမျှမစုံလင်သည်နှင့် Lewis ကသူကစုံလင်သည် မှလွဲ. ယေရှုရဲ့သင်ကြားမှုကိုအောက်ပါတန်ဖိုးရှိမစပ်ဆိုင်ကြောင်းကိုအစကတည်းကထံမှယူဆမှာအမှားစေသည်။ အကျိုးသက်ရောက်မှုခုနှစ်တွင်, ထို့နောက်, သူ့နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားမှားယွင်းသော trilemma ဒီမှားယွင်းသောအကြပ်အတည်း၏အဓိကအကြောင်းရင်းအပေါ်သို့အခြေခံသည်။
ဒါဟာ Lewis ကတစ်ဦးငြင်းခုံတစ်ဆွန်း shell ကိုများအတွက်ဆင်းရဲသားအခြေခံအုတ်မြစ်ဘို့ရှိသမျှကိုလမ်းဆင်းမယ့်ယုတ္တိမှားယွင်းတဲ့သုံးသပ်အကဲဖြတ်ချက်တွေအပေါ်ပါပဲ။
ဘုရားမဲ့ဝါဒီ, Nontheistic ၏အဓိပ္ပာယ်
သံပုရာ v ၏ 1971 ခုနှစ်ဖြစ်ရပ်မှန်။ Kurtzman
ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်ခြင်းနှင့် Arguments အတွက်အားနည်းချက်တွေကို: Barnum Effect နဲ့ယုံလွယ်သော
အိုင်းစတိုင်းကိုးကားခြင်းနှင့်လူ့အဖွဲ့အစည်းများနှင့်နိုင်ငံရေးအပေါ် Views စာ
ရုပျဝါဒဆိုတာဘာလဲ - သမိုင်းနှင့်အဓိပ္ပာယ်
တစ်ဦး Apatheist ဆိုတာဘာလဲ
Que အဆိုပါ subjunctive လိုအပ်ပါတယ်လောင်းပါသလား?
အက်ဖ်ဒဗလျူ: ထိုသူတို့က FAT ရုပ်ဆိုးဆို ...
သငျသညျက Superman (1978) အကွောငျးသိဘယ်တော့မှမ 10 အချက်အလက်
NFL အတိုက်အခံဒီ Run ကို Down အတွက်စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားကိုဘယ်လိုအထဲက Find
ပုဂ္ဂလိကကျောင်းများအကြောင်းမိဘများဖူးထိပ်တန်း 10 မေးခွန်းလွှာ
ကနေဒါဝင်ငွေခွန်အခွန်အဘို့အ T4E အခွန်ချော်
လှုပ်ရှားမှုမှတဆင့် ESL Learn
မှေးဖှားတစျဖနျ: သင် Daredevil Read ဖို့လိုအပ်
ပြင်သစ် Expression "pas က de ပြဿနာ" ကိုသုံးပါဖို့ကိုဘယ်လို
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Coastal ရှင်းလင်းရေး
အမေရိကန် Virgin Islands အရေးပါသောမှတ်တမ်း - မွေးဖွားခြင်း, မရဏ, အိမ်ထောင်ရေးနှင့်ကွာရှင်း
အစုလိုက်အပြုံလိုက်လူသတ်မှု, network ပေါ်ကိုတက်လာတဲ့နှင့် Serial Killers
အံ့သြဖွယ်မြင့်မျှော်စင် - မိုးမျှော်တိုက်၏ပြိုင်ဘက်
အဆိုပါ 8 အချမ်းသာဆုံးနေ့အခြိနျ Talk ကိုပြရန်ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်
အဆိုပါ Ancien စစ်အစိုးရအတွင်းပြင်သစ်တော်လှန်ရေးရဲ့မူလအစ